Raincoat Le-raincoat iyinhlanganisela yejazi lemvula, isambulela kanye namabhulukwe angenamanzi. Ngokuya ngezimo zezulu kanye nenani lemvula ingashintshwa ibe ngamazinga ahlukahlukene okuvikela. Isici sakhe esiyingqayizivele ukuthi ihlanganisa raincoat kanye nesambulela entweni eyodwa. Nge- "ambrella raincoat" izandla zakho zikhululekile. Futhi, ingalungele imisebenzi yezemidlalo njengokugibela ibhayisekili. Ngaphezu komgwaqo ominyene awupheleli kwezinye izambulela njengoba isambulela sikhula ngaphezu kwamahlombe akho.
Indandatho Leli yinsimbi ethokozisayo yemvelo eyinqaba. I- “Doppio”, esimeni sayo sokuphapha, ihamba ngezikhombisi ezimbili ezifanekisela isikhathi samadoda: okwedlule nekusasa labo. Iphatha isiliva negolide okubonisa ukuthuthukiswa kwezimo zomoya womuntu emlandweni waso wonke emhlabeni.
Indandatho Ukuqoqwa Kwemvelo Ubuhle kudalwe njengesikweletu ehlathini lase-Amazon, amagugu hhayi iBrazil kuphela, kodwa emhlabeni wonke. Leli qoqo liletha ndawonye ubuhle bemvelo nobuhle bamajika wesifazane lapho ukwakheka kobucwebecwebe futhi kucindezela khona umzimba wowesifazane.
Umgexo Umgexo uvumelana nezimo futhi wenziwe ngezicucu ezahlukahlukene ezenziwe ngokuhlangana komthungo ndawonye ukuze zilinganise kahle intamo yabesifazane. Izimbali eziphakathi nendawo ohlangothini lwesokunene ziyajikeleza kanti kukhona imvume yokusebenzisa isiqephu esifushane somgexo ngokwahlukana njenge-brooch Umgexo ukhanya kakhulu unikezwe ukwakheka kwe-3D nobulukhuni bento. Isisindo esikhulu sayo singama-362.50 amagremu enziwe yi-18atl, enama-carats angama-518.75 amatshe namadayimane
Usilika Foulard I- "Passion" ingenye yezinto "Ezizithobayo". Songa isikhafu sikasilika esikweleni sephakeji noma usenze umdwebo wobuciko bese usenza siphile isikhathi eside. Kufana nomdlalo - yonke into inemisebenzi engaphezu kweyodwa. "Okuzithobayo" kufaka phakathi ukuxhumana okuthe xaxa phakathi kwezandla zakudala nezinto zokwakhiwa zanamuhla. Idizayini ngayinye iyingqayizivele yobuciko futhi ixoxa indaba ehlukile. Cabanga indawo lapho yonke imininingwane encane ilandisa khona indatshana, lapho ikhwalithi iyigugu lempilo, nokunethezeka okukhulu kakhulu kuyenzeka kuwe. Yilapho "Abazithobayo" behlangana nawe. Vumela ubuciko uhlangane Wena futhi ukhule nawe!
Raincoat Indandatho Indandatho Umgexo Usilika Foulard Iqoqo Lobucwebe